မိသားစု - Ningbo BestCleaner Co. , Ltd မှ
တစ်မိသားစုများဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မာမီကပိုကျေနပ်စရာဖြစ်ပါသည်လိုပဲကလေးကပိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သည်နှင့် Dady ပိုပြီးပျော်ရွှင်သလဲ အဘယ်ကြောင့်တစ်ပါတီကိုင်ထားကြသည်မဟုတ်လော BVC သင်တို့ရှိသမျှသည်စင်ကြယ်အလုပ်အကိုင်များပြီးအောင်ကူညီကြမည်, မစိုးရိမ်ပါ။ ။
သငျသညျမိတ်ဆွေစာရေးရှိသည်နှင့်သူတို့ကိုအံ့သြသွားချင်, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး BBQ ပါတီ hosting အားဖြင့်သူတို့ကိုအံ့သြသွားသည်မဟုတ်လော သင့်ရဲ့ရှုပ်ထွေးအိမ်သူအိမ်သားအချို့မိတ်ဆွေကောင်းနှင့်အတူသင်၏အချိန်ခံစား၏လမ်းရဖို့မသွားပါစေပါနဲ့။ ဒီနေရာတွင်သင့်အိမ်၌သန့်ရှင်းရေးကိုကူညီမယ့်5ခြေလှမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည် - မပါစိတ်ဖိစီးမှုရုံလွယ်ကူသော-to-အောင်မြင်ရန်တာဝန်များကို။
ဒီတော့ဘယ်မှာစတင်ရန်? တစ်ဦး BBQ ပါတီအဘို့, ဧည့်သည်များပြင်ပတွင်မိမိတို့၏အချိန်အများစုကိုဖြုန်းပါလိမ့်မည်, ဒီတော့အိမျတျော၌ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့အရေးအပါဆုံးဒေသများအခန်းတစ်ခန်း, မီးဖိုချောင်နဲ့ရေချိုးခန်းအသကျရှငျ, အဝင်ပေါက်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုလုံးကိုအိမ်သူအိမ်သား clean မဟုတ်ဘဲပါတီလမ်းကြောင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့မလိုအပ် - လူအများစုရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစားပွဲ, စင်ပေါ်နှင့်၎င်းတို့၏အချိုရည်သတ်မှတ်ထားဖို့သောအရပ်တို့ကိုမအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်း၏လွယ်ကူသောရုံ5ခြေလှမ်းများ:
1. လတ်ဆတ် & Declutter သင့်ရဲ့တိုက်ခန်းကို။
သငျသညျစတင်ခင်မှာ, ကလတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့အနံ့ဒီတော့သင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားထွက်လေအနည်းငယ်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ တစ်ရနံ့ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းသို့မဟုတ် deodoriser နှင့်သင်၏အာကာသပက်ဖြန်းအချို့သောအနံ့ကထပ်ပြောသည်နှင့်စိတ်ဓါတ်များသတ်မှတ်။ နောက်တစ်ခုကအလွန်အမင်းရှုပ်ပွနေအောင်ဖြစ်ကြောင်းပါတီလမ်းကြောင်းအတွက်မဆိုဒေသများကိုင်တွယ်ရန်အချိန်ပါပဲ။ ပါတီကျော်အထိကဤသိမ်းထားဖို့ရေချိုးခန်းခြင်းတောင်းသို့မဟုတ်သေတ္တာများကဲ့သို့အပေါငျးတို့သမလိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုထားရန်ယာယီသောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေခြင်းအကောင်းဆုံးနဲ့အရိုးရှင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။
ကကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအစှဲစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောင်ဒါကြောင့်သင့်ဧည့်သည်များမြင်ရပါလိမ့်မည်ပထမဦးဆုံးအရာသည်သင်၏ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်အမှိုက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့ပြင်ပတစ်ဦးအမြန်မောင်းလုပ်ပါ။ ထိုအခါအတွင်းမှသင့်ရဲ့လမ်းစေနှင့်သင့်ဝင်ပေါက်ခန်းမပတ်ပတ်လည်တစ်ဦးမောင်းပြုမဆိုစုပြုံပြွတ်သိပ်ရှင်းလင်းရေးနှင့်မျက်မှောက်ထဲကဖိနပ်, အကျီ, ဦးထုပ်နှင့်မေးလ်ချပြီး။ စားပွဲသို့မဟုတ်အလှဆင်တ္ထုကိုချွတ်မွမှေုနျ့နှငျ့အခြို့သော deodoriser ကိုလေပေါ်မှာပ။
3. နေထိုင်မှု ROOM တွင် Prepping
ရာအရပျပစ္စည်းများထဲကတစ်ခုခုထကောက်နေသဖြင့် Start ကို, ဖြောမွေ့ရာပေါ်မှာလျောင်း, ကူ, ခေါင်းအုံးနှင့် refolding (- သင် BVC ထုတ်ကုန်မဆို အသုံးပြု. ပြီးနောက်ဒီလိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သို့သော်မည်သည့်အစွန်းအထင်းထဖုံးအုပ်ဘို့ကြီးသော) ပစ် ။ Next ကိုတစ်ဦးအားမိုက်ခရိုအထည်ကို အသုံးပြု. စားပွဲ, တီဗီဖန်သားပြင်နှင့်အခြားဖုန်ထူမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမဆိုဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်တက်ဖုန်စုပ်, သင်၏လေဟာနယ်ရဲ့ဖြီးသို့မဟုတ်ရေပိုက်ကို attachment သုံးပြီးသင့်ရဲ့အင်္ကျီပျဉ်ပြားရှင်းလင်းဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။